How To Create Successful Mindset
အောင်မြင်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားမျိုးရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?&nbsp;ကိုယ်က အောင်မြင်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားမျိုးရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတချို့ကို မနေ့သစ်က ပြောပြပေးပါမယ်။၁။ ကိုယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အရာကို ရှာဖွေပါလူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ကို စိတ်အားထက်သန်စေတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို ရောက်အောင်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီး အရှုံးတွေကိုလည်း လက်မလျှော့ပဲ ရင်ဆိုင်နိုင်သွားပါတယ်️။ အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်လည် စမ်းစစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကဘာလဲဆိုတာကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်ဆောင်လိုက်ပါ။၂။ အကောင်းဘက်ကနေတွေးပါကိုယ်က တစ်ခုခုလုပ်ကိုင်နေရင်းနဲ့ မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ တွေးမိတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်က လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး အကောင်းဘက်ကနေ လှည့်တွေးလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုတွေးဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုလေးတွေးကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် ကိုယ်က လုပ်ချင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်။၃။ များများပြုံးပါပြုံးတာက စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချနိုင်ပြီး ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတွေးမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတို့တွေသိပါသလား? ပြုံးတာက ယုံကြည်မှုလျော့နည်းတာအတွက် ဆေးတစ်ခွက်ပါပဲ။ ကိုယ်က ပြုံးနေရင် အကောင်းဘက်ကနေ တွေးတတ်လာပြီး ကိုယ့်အနီးအနားကလူတွေကလည်း အကောင်းမြင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကိုယ်က စစချင်းမှာ တမင်လုပ်ပြုံးမှရတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း များများပြုံးလိုက်ပါ။ ပြုံးတာက ကြောက်တာတွေ စိတ်ပူပင်မှုတွေ မျှော်လင့်ချက် ပျောက်ဆုံးနေတာတွေကို အနိုင်ယူသွားနိုင်ပါတယ်။၄။ အားကစားလုပ်ပါကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်က အားကစားပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တော့ စိတ်လည်းကြည်လင်ပြီး အကောင်းဘက်ကနေ ပိုတွေးခေါ်နိုင်တယ်လေ။ စိတ်ကြည်ပြီး အကောင်းဘက်ကနေ တွေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်က ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက် ခိုင်ခိုင်မာမာချနိုင်သွားမယ်လေ။၅။ စကားမပြောခင် သေချာစဉ်းစားပါစကားပြောတဲ့အခါ သုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေက အရမ်းကို အရေးကြီးသလို အစွမ်းလည်း ထက်ပါတယ်။ စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်နဲ့ ဘဝကြီးတောင် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က အကြံဉာဏ်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေပြောတော့မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးအဆိုးဘက်က တွေးတာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကိုယ် စမပြောခင်မှာ ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ အကောင်းဘက်ကနေပြောတာမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။New Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ံHow To Improve Your Emotional Intelligence In The ...
21 ရာစုခေတ်မှာ အလိုအပ်ဆုံး soft skill တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Emotional Intelligence(EI) ဟာ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို သင် သိပြီးလား? EI ဆိုတာက စိတ်ခံစားချက်တွေ ခံစားမှုတွေကို ကောင်းကောင်းနားလည်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ EI ကို အောက်ပါ အချက် ငါး ချက်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။(1) Self-awareness(2) Self- Ingulation(3) Internal (or intrinsic) motivation(4) Empathy(5) Social ...
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်များစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များကို လျှောက်ထားနိုင်လိုပါက New Day Jobs မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Nanda Win MyintDigital Marketing Executiveဘယ်လောက်တော်တဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အချိန် ဘာဆိုဘာမှ မလုပ်ချင်တဲ့ အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ကိုစိတ်ဓာတ်ကျစေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကတော့ အလုပ်ကိစ္စ အဆင်မပြေတာ၊ စာမေးပွဲကျတာ၊ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ၊ အသဲကွဲတာတို့ စတဲ့ အရာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ကို နေ့စဉ်လုပ်ရမဲ့ အရာတွေကို မလုပ်နိုင်တော့ လောက်အောင်ကို စိတ်ဓာတ်ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်။၁. ရည်မှန်းချက်သေချာချပါအကယ်၍သင့်မှာ ရည်မှန်းချက်မရှိသေးရင် အနည်းဆုံး ၂ ခု ၃ ခု လောက်ကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ဥပမာ- ၁လအတွင်းလုပ်မှာ ၁ ခု၊ ၅ လအတွင်း လုပ်မှာ ၁ခု၊ ၁ နှစ်အတွင်း လုပ်မှ တစ်ခု အသည်ဖြင့် သင်ကြိုက်သလို ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။သင်ရဲ့ လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို သင်စိတ်မပါတော့တဲ့ အခါ သင်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်လာဖို့အတွက် သင်အခုမလုပ်ချင်၊ စိတ်မပါတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်တာကို သတိရပါ။အဲလိုသတိရဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သင့်ရည်မှန်းချက်တွေကိုချရေးပြီးတော့ သင်နေ့တိုင်း ကြည့်နေကျနေရာ တွေမှာ ကပ်ထားလိုက်ပါ။၂. အစားအသောက်ဌက်ပျောသီး၊ လက်ဖက်စိမ်းဖျော်ရည်၊ဘယ်ရီသီး၊ ချောကလက်၊ မြေပဲအစရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် သင်ရဲ့နေ့စဉ် အစားအသောက်စာရင်းထဲမှာ အထက်ဖော်ပြပါထဲက တစ်ခုခုပါအောင် စားသင့်ပါတယ်။၃. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှသင့်ကို စိတ်ခံစားချက်ကောင်းမွန်စေတဲ့ dopamine, endorphin, serotonin အစရှိတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်တွေထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်လာဖို့အတွက် သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။၄.သီချင်းနားထောင်ခြင်းသီချင်းနားထောင်တာက လည်းသင့်ကို စိတ်သက်သာရာ ရစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကို စိတ်သက်သာရာ ရစေပြီး ပျော်ရွှင်စေမယ့် သီချင်းလေးတွေဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။၅.သင့်ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံသင့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ နေထိုင်မှုပုံစံကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်အခြေအနေကို အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ သင်နေ့တိုင်းနောက်ကျမှ အိပ်ပြီး မနက်ကို အလုပ်သွားဖို့အတွက် ကမန်းကတန်းထပြီး မနက်စာတောင်မစားရပဲသွားရတာ ကြာလာရင် သင်အနေနဲ့ မပျော်ရွှင် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့အိပ်ချိန်ကို သေချာစီမံဖို့လိုအပ်ပြီး မနက်ကို အလုပ်မသွားခင် မနက်စာကို စားဖြစ်အောင်စားပြီးတော့ အလုပ်မသွားခင် သင့်ကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေမယ့် စာလေးဖတ်သွားခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာအစမှာ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။၆.ဘာလို့ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလဲကိုယ်ဘာလို့ ဒီရည်မှန်းချက်တွေချရတာလဲ ရဲ့ နောက်မှာ အကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်၊ သင့်မှာလဲရှိနေမှာပါ အဲဒီ အချက်တွေကလည်း သင့်ကို တစ်နေ့တစ်နေ့ ဆက်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အလုပ်လုပ်ဖို့ အတွက် ခွန်အားတွေပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ အချိန်တိုင်း အဲဒါလေးတွေကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။New Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ New Day Jobs မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Do’s And Don’t When You Searching ...
Nanda Win MyintDigital Marketing ExecutiveDo's1. Filter တွေကို အသုံးပြုပါသင် Social Media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook, Linkedin တို့အပေါ်မှာရှာသည် ဖြစ်စေ, Job Platform website တွေမှာ ရှာသည်ဖြစ် စေသင်ရှာချင်တဲ့၊သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ကို သင်နဲ့သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ကို လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် Filter တွေကို အသုံးပြုပါ။ Filter တွေကတော့ သင်ရှာဖွေတဲ့ နေရာပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - အလုပ်အကိုင် အမျိုးအစား၊ တည်နေရာ၊ လစာ2....
Four Learning Tips For Effectiveness
Khant Zaw Hein Digital Marketing ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။